ဆီးခံဝမ်းခံလောင်ကွက် မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
မေမေဖေဖေတို့ကြုံတွေ့နေကျဖြစ်တဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေမှာဖြစ်သော ဆီးဝမ်းခံ(Diaper)ကြောင့်ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အရေပြားလောင်ခြင်းကို မည်သို့မည်ပုံကာကွယ်ကြမလဲဆိုတာလေးကိုပြောကြရအောင်။ ကာကွယ်နည်းမပြောခင်မှာ Diaper rash ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်း အရင်ပြောပြချင်ပါတယ်။
Diaper rash ဆိုတာ ဘာလဲ???
Diaper rash ဆိုတာဟာ ဆီးဝမ်းခံ(Diaper)ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အရေပြားလောင်ခြင်း(ဝါ)အရေပြားရောင်ယမ်းခြင်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းဟာ Diaper စိုစွတ်ခြင်း၊လဲမပေးပဲကြာရှည်စွာဝတ်ဆင်ထားခြင်း၊အရေပြားနှင့်ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊ပွန်းပဲ့ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကလေးတွင်သာမက လူကြီးတွေမှာလဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။ Diaper rash ဟာကလေးကိုအလွန်နေရထိုင်ရခက်စေတာကြောင့် မဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ထားသင့်ပါတယ်။
Diaper rash မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ???
၁။Diaper မကြာခနလဲပေးပါ။ ညစ်ပတ်ပေရေ(သို့)စိုစွတ်တာနဲ့ လဲပေးပါ။
၂။Diaper လဲပြီးတိုင်း ရေနွေးနွေးလေးဖြင့် ညင်သာစွာကလေးအောက်ပိုင်းကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါ။ နူးညံ့စိုစွတ်သောအဝတ်၊ဂွမ်းလုံးသန့်လေးတွေနဲ့ ညင်ညင်သာသာလေးသန့်ရှင်းပေးပါ။ အရက်ပြန်ပါသောသန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းများမသုံးသင့်ပါ။ ဆပ်ပြာသုံးမည်ဆိုပါက ကလေးသုံး၊အနံ့မပါသောဆပ်ပြာကိုသာသုံးပါ။
၃။သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးပါက ကလေးအောက်ပိုင်းအား ပဝါသန့်လေးဖြင့်ညင်သာစွာပုတ်၍သော်လည်းကောင်း၊သဘာဝအတိုင်းသာလည်းကောင်း အခြောက်ခံပါ။ ထူထဲကြမ်းတမ်း၍မသန့်ရှင်းသော အဝတ်များဖြင့်မသုတ်ရပါ။
၄။Diaper ကိုအရမ်းမကြပ်ပါစေနှင့်။ အရမ်းကြပ်လျှင်လေဝင်လေထွက်မကောင်းပဲ ပူနွေးစွတ်စိုပြီး Diaper rash ပိုဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အရမ်းကြပ်တဲ့ Diaper ကြောင့် ပေါင်နှင့်ခါးနေရာမှာပွန်းပဲ့ရာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၅။ကလေးကို Diaper မဝတ်ပဲကြာကြာထားပေးပါ။ မလိုအပ်လျှင် Diaperကိုလုံးဝမဝတ်ပါနှင့်။ သဘာဝလေဖြင့်ထိတွေ့ခြောက်သွေ့ခြင်းဟာပိုမိုကောင်းမွန်ပါတယ်။ အောက်ပိုင်းကိုညစ်ပေမသွားစေရန် သန့်ရှင်းသောပဝါစကြီး၊အိပ်ရာခင်း ခင်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။
၆။Diaper Rash အား ကာကွယ်ပေးနိုင်သော အရာများ အသုံးပြုခြင်း။ Diaper လဲတဲ့အခါတိုင်းမှာ zinc oxide (သို့) petroleum jelly သုံးစွဲပးပါက အရေပြားလောင်ခြင်းကိုသက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
၇။Diaper လဲပြီးတိုင်း သင့်လက်ကိုစင်ကြယ်စွာဆေးကြောပါ။ လက်ဆေးခြင်းဟာ လက်နဲ့အတူကပ်ပါလာမယ့် ဘက်တီးရီးယား၊မှိုပိုးတွေကိုသင့်ထံ(သို့)သင့်ကလေးရဲ့တစ်နေရာမှတစ်နေရာ(သို့)အခြားကလေးထံသို့ မကူးစက်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သားသားမီးမီးအရေပြားလေးတွေ Diaper rash ကင်းဝေးလို့ကျန်းမာလှပနိုင်ကြပါစေ။